သံတွဲမှနောက်ဆုံးရသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သံတွဲမှနောက်ဆုံးရသတင်း
Posted by chityimhtoo on Jun 8, 2012 in News | 17 comments
ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတော က ၂၁ မိုင်ကွာဝေးပါတယ်။ခုစစ်တပ်ကဘူးသီးတောင်မှာဘဲရှိနေပါတယ်..
ခုမောင်းတောမှာ အုပ်စု၂စုခွဲလိုက်ပြီ…ကုလားဝင်လာမဲ့အပေါက်ကို ရှိမဲ့ အင်အားနဲ့ ဓါးကိုင်ပြီးစောင့်နေကျတယ်။မိန်းမနဲ့ခလေးတွေကိုတော့ ၃ရက်ကွပ် ကိုပို့ထားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။
မောင်းတောကနေဘူးသီးတောင်ကို သွားဘို့ကို ကြားမှာအားလုံးကုလားရွာတွေချည်းဘဲဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ချောင်ပိတ်မိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကမောင်းတော ကိုလက်လွှတ်လိုက်
ပြီလားတောင်မသိတော့ဘူး။ခုလက်ရှိ ကုလားအင်အားက ၅သိန်းခန့်ရှိပါတယ်။
တစ်ကယ်ဆို၇င် ဟက်စကီး ၁၀စီးလောက်နဲ့ ညတွင်းချင်း စစ်တပ်ကိုသွားချပေးထားရမှာ…တောက်…
မောင်တော က ရခိုင်သားချင်းတွေ
အုပ်စီး မပျက် နေနှိုင်ကြပါစေ …
လူနည်းစု ဆို၊ ဟုတ်တောင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု မဟုတ်ဘူး၊ မရောစေနဲ့၊
ခုရှူတ်မှ နောင်ရှင်းဆိုတဲ့စကား သိတယ်မှိူ့လား၊ အကြောင်းရှာနေစရာတောင် အထူးမလိုတော့ဘူး၊
မြွေပွေးသေးသေးလေး ဆိုပြီး ခါးပိုက် ဆောင်ထားမယ်စိတ်မကူးနဲ့၊
ဒီကောင်က ဒီအရွယ်အစားအတိုင်း အမြဲရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူး၊
အခြား eleven တို့ ဘာတို့ လည်း ဖတ်ကြပါဦး .. (elevenေ၇ ကူးမတင်တော့ ဘူးဂတိပေးထားပေမဲ့ အခြေအနေအရ ကူးတင်ရတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ)
ည ၉း၀၀ ကတင်တဲ့ သတင်းပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကွပ်ကဲရေးရုံး (သတင်းထုတ်ပြန်ရေး) မှ သိရှိရသော သတင်းများအရ မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့အပြင် အခြေအနေဆိုးမှုများ မဖြစ်နိုင်တော့ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရပါသည်။ ကွပ်ကဲရေးရုံးသည် စစ်တွေမြို့တွင် အခြေစိုက်ထားသော ရုံးဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့နယ်နှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေများကို ည ၇ နာရီအချိန်က နောက်ဆုံးသိရှိထားခြင်း ဖြစ်ကာ ဆက်လက် သိရှိရသည်များကို ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု သိရပါသည်။
၄င်းတို့အနေဖြင့် မောင်တောမြို့နယ်အတွက် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်မည်ဟူသော သတင်းများ သိရှိထားသော်လည်း တရားဝင် ညွှန်ကြားချက် ရောက်ရှိမလာသေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
မောင်တောမြို့ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း လမ်းမကြီးများ၊ အများပြည်သူတို့သွားရာ လမ်း၊ လမ်းမကြီး၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကြား၊ ဥယျာဉ် (သို့မဟုတ်) အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော ဗလီ၊ ကျောင်းနေရာများတွင် ၅ ဦး (သို့မဟုတ်) ၅ ဦးထက် ပိုသောသူများ စုဝေးခြင်း မပြုရန်နှင့် ညနေ(၁၈၀၀) နာရီအချိန်မှ နံနက်(၀၆၀၀) နာရီအထိ ကာလအတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၄ အရ ထုတ်ဆင့်လိုက်သည် ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက ၎င်း၏ facebook စာမျက်နှာတွင် ယနေ့ ည ၈ နာရီ ၄၆ မိနစ်တွင် ဖော်ပြရေးသားထားပါသည်။
ကိုထူးဆန်းရေ … မနေ့က ညနေ ခြောက်နာရီကတည်းက MRTV4မှာ မာရှယ်လောထုတ်တာ ကြားလိုက်ရတယ် … ညနေခြောက်နာရီကနေ မနက်ခြောက်နာရီ အပြင်မထွက်ရအမိန့် လေ … ။
ပုဒ်မ၁၄၄အရ အရေးယူခြင်းခံရမယ်လို့လည်းရေးထားတယ် … ။ နေ့ပိုင်းမှာလည်း .. လူငါးဦးထက်ပိုပြီး မစုရဘူးဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတယ် … ။
ကြော်ငြာချက် ကြည့်လိုက်တာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတင်မကပဲ …. အိမ်ပေါ်တက်ရိုက်နှက်တာလည်း ပါတယ် ၊ ပစ္စည်း လုယှက်တာတွေလည်းပါတယ် … ။ ကြားရတာတော့ တကယ် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ …. ။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ …
လိုအပ်မယ်ဆို အပြုတ်တာရှင်းတော့။ ဘယ်ကောင်အော်အော် ဂရုမစိုက်နဲ့တော့။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာ့ ရာဇ၀င်မှာ ဘယ်တုံးကမှမရှိခဲ့တဲ့ လူမျိုး… အမြစ်မကျန်ရှင်း.. လူလိုရင်တော့အမြဲအဆင်သင့်ဘဲ ..ရခိုင်ဒေသမှ ရခိုင်လူမျိုး မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကျန်းမာကြပါစေ…
ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတော မှာညမထွက်ရအမိန့်ထုပ်လိုက်ပြီဗျို့။ MRTV4 မှာ ၁၀ နာရီ ၂၀ က Breaking News ကြေညာသွားတာပါ။
သတ်ရင်လည်း ခွေးမျိုး လ.၀.က ပါ သတ်ကွာ …ဒီကောင်တွေကို ငါးသိန်းကို အားရပါးရ ၀င်ခွင့်ပေးထားတာ သူတောင်းစားတွေ..ပိုက်ဆံရဖို့ပဲ သိတယ်…
ညီအစ်ကိုတော် ရခိုင်တိုင်းရင်းအားလုံး ဘေးကင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဦးစွာ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို တိုင်းတပါးသားတွေက အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံနေရတာသိရလို့ ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပဲ စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေရဲ့ အဓိကလက်သည်တရားခံတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တရုတ်၊ ကုလား မျိုးစုံသွင်းလာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အနီးဆုံးရန်သူ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ အခြေချနိုင်အောင် ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက် ခေတ်ပျက် စနစ်ပျက်၊ ခေတ်ဆိုး စနစ်ဆိုး အချိန်အတွင်းမှာ တန်ခိုးထွားခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတစ်ရပ်ကို လက်ညှိုးထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေမှာ အာဏာရူး စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ငါ့အာဏာတည်မြဲရေးကို မထိခိုက်သရွေ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြ ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးကို ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာ ရှိလာစေပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ တိုင်းတပါးသားတွေ ဒီလောက်အထိ အခြေခိုင်လာနေတာကို ကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ မသိခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တော့ ချီးစားပြီးပြောရင်တောင် ကြိုက်လို့စားတယ်လို့ပဲ ယုံကြည်လိုက်မှာပါ။
အဲသည်လိုပဲ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ လ၀က ဆိုသူတွေရဲ့ ကိုယ့်တဘို့တည်းကိုပဲ ကြည့်တတ်တဲ့၊ ငွေမြင်ရင် ဘာမဆိုလိုက်လျောတတ်တဲ့၊ အမျိုးစောင့်တရားကင်းမဲ့တဲ့ ခွေး၊ နွား သာသာ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့် ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး ရေတိမ်နစ်ရမယ့်အရေး ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ တိုင်းတပါးသားတွေကိုတင်မဟုတ်ပဲ အသားထဲကလောက်ထွက်သူတွေကိုပါ အမြစ်ဖြုတ် သုတ်သင်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဗမာကို မုန်းတီးရခြင်းကလည်း ဒီလို ခွေးသာသာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအများကြီးကို ကြုံတွေ့လာခဲ့ရလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကာကွယ်ကြသူတွေအဖြစ် ထင်ရှားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကပေးလာတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို အင်အားမဖြစ်စေတဲ့အပြင်၊ ငွေရရင် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ပါ ထောင်ထဲပို့တတ်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကြောင့် ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ပြန်လည်ပြေပျောက်စေမယ့် တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အားပေးစာနာမှုမျိုး၊ ကူညီရိုင်းပင်းမှုမျိုး အခုအချိန်မှာ အမြန်လိုအပ်နေပါပြီ။
I am bamar but your kk2 comment, I like. We must do the unity and fight for our country and our nationals. Unity is strength.
အစိုးရက အက်ရှင်ယူမှု ကြံ့ကြာနေတာကြောင့် … တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီလို အခြေနေတွေထိ ရောင့်တက်လာကြတာပါ ။ အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း … လူသတ်တရားခံတွေကို အက်ရှင်ယူဖို့ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အစဉ်တိုင်းလုပ်နေတော့ ….. ၊ အချိန်ယူရတာလည်း ရှိမှာပေါ့လေ … ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေရေးရာ စနစ်တွေ၊ အရေးယူမှုလုပ်တာတွေက ၊ အထောက်ထားခိုင်လုံလျှင်တောင်မှ …. မကြံ့ကြာသင့်ပဲ ကြံ့ကြာတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိတတ်တယ် …. ။ အဲ့ဒီအခါ အခုလို ဆူပူအုံကြွမှုတွေ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာပါရောလား ။
အခုလို လုပ်တာကတော့ မင်းမဲ့စရိုက်ကျလွန်းပါတယ် ။ ပြည်တွင်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုတောင် ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တာ … ရင်နာလို့ မဆုံးပါဘူး ။ သေချာစွာ မကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါလျှင် .. အဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံး အမည်းစက်ဖြစ်တော့မယ် ….. ။ ရခိုင်လိုဒေသမျိုးဟာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ရော ၊ စေတီပုထိုး ၊ သဘာဝသယံဇာတရော ၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးစဉ်တွေရောနဲ့ ….. အဖိုးတန်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ … ။
လူရမ်းကားတွေကြောင့် …. မသွားသင့်တဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့လျှင် …. အရမ်းကို နစ်နာဆုံးရှုံးရမယ့်အဖြစ်ပါ ။
ဟိုမှာ သေကျေ ပျက်စီးနေပြီ————
ဒီမှာတော့ အစည်းအဝေး လုပ်နေကြတုန်း———–
ကြိုးနီစနစ် ကြီးအမြန် ပပျောက်ပါစေ———–
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ၊ အပေါက်စောင့်ရဲမှအစ သမ္မတအထိပါ၊ထွက်ဆိုဘယ်သူမှမထွက်ချင်ကြဘူး။
တိုင်းမှူးကအောက်ခြေခြစားမှာစိုးလို့စည်းကမ်းမဲ့တွေ၊(၂လုံး)ထီတွေဖမ်းကြ၊မဖမ်းနိုင်ရင်ထွက်ဆိုတော့၊(လမ်းကြောင်းမရှိတဲ့)ဘု့မသိဘမသိသူတွေထောင်ထဲရောက်ကုန်ရော၊ ယူနီဖေါင်းဝတ်ပြီးတာနဲ့တာဝန်အရဆိုပြီးဥပဒေပုဒ်မတွေတပ်တော့တာဘဲ၊သမ္မတကြီးကဥပဒေဆိုတာဘယ်သူ့အပေါ်မှမရှိဘူးတဲ့ ဒီလိုဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတာဝန်မဲ့မူ့နှင့်အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်ကို တိုင်းမှူးရေဖမ်းဗျာ၊မဖမ်းနိုင်ရင်ထွက်………………….
500000 ဘာလုပ်ရမှာလည်း လုံးဝ မကြောက်ဘူး လို့ပြောလိုက်စမ်းပါ သူများ နိုင်င့ လာနေပြီ လူပါးဝတဲ့ဟာတွေ အကုန် သတ်ပစ်ခဲ့
အင်း..စေတနာနဲ့ မတန်လို့ ..ဒီမြေနဲ့ မတန်လို့ …မြန်မာ့မြေက အမျိုးပြုတ်အောင် မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတာကိုးကွာ
မင်းတို့ လဖွတ်သွေးကြွလုပ်ရပ်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အသီးပွင့်ဟာ ဘာလဲဆိုတာ တစ်ချိန်သိရမှာပါ…
မြန်မာ့မြေမှာ ရိုဟင်ဂျာ ခြေရာတောင်မကျန်အောင် ညီညီညွတ်ညွတ် ရှင်းလင်းကြဖို့အားလုံးပဲမှတ်ထားကြစေလိုပါတယ်..